5 HP Magetsi Magetsi anotengesa, 5 hp yemagetsi mota 1725 rpm imwe chikamu
5 HP Magetsi Magetsi 1725 rpm imwe chikamu yekutengesa
Tora Quotation Ye 5 HP Magetsi Magetsi
5 HP Magetsi Magetsi Anotengesa
5 hp yemagetsi mota 1725 rpm imwe chete chikamu, Iyo yakakura yakawanda ye5 hp yemagetsi mota kuSogears Industrial Supply. Sogears Industrial kugovera pano kuti itsigire zvese zvako kugadzira kwesimbi uye kugadzirisa. 5 hp yemagetsi mota 3 phase, 5 hp magetsi chikepe mota, 240v 5hp magetsi emagetsi etc.
Semutengesi wepasi rese we5 hp 184t chimoto mota single phase uye 5 hp magetsi mota 120v ine IEC furemu saizi Y2-112M-4 motors, tinopa dzakasiyana mhando dzeA5 hp magetsi mota 3 phase inosanganisira Traction Motors, 5 hp 184t chimoto mota imwe chete chikamu. 5 hp yemagetsi mota 1725 rpm imwe chikamu. Ichi chikamu chine mutsetse uzere we compressor magetsi mota kubva 240v 5hp magetsi emagetsi kusvika ku10 bhiza uye pamusoro. Brand nyowani 5 HP 230 volt compressor basa magetsi mota. pamutengo mukuru, kugamuchirwa kubvunza isu.
Zvekurima, kugadzira, kudiridza, oiri & gasi indasitiri kana mashopu madiki emaseya epombi, 5 hp mota yemagetsi 3 chikamu chine basa rakakosha. Isu tinogadzira emagetsi, magneto, mavhiri mota 10 hp mota yemagetsi, 5 hp mota yemagetsi chikepe uye nezvimwe.
Tora aa kutsiva mweya compressor mota kune yako Ingeroll rand t30 compressor, 240v 5hp mota yemagetsi isarudzo yakanaka nemitengo yepasi pasi pa5HP North American Electric Motors; mamiriro akanyanya kwazvo ane 5 hp mota pane 30 amp redunhu, kushanda kwakanyanya 5 hp yemagetsi mota 3 chikamu 3000 RPM AC Electric Electric 3.7 KWH pamutengo wakaderera kubva kuSogears.
Standard mota saizi kw, Yakazara mitoro mitsetse ye460 volts, 230 volts uye 5 hp magetsi emagetsi 120v - imwe chete uye 3-chikamu, General chinangwa AC, isu tinopa 5 hp mota yekutaurwa, tibvunze kana kutitumira email yePatalogs.
Yakawanda ye5 hp yemagetsi mota 120v yakagadzirirwa kumhanya pa50% kusvika ku100% yemakona akaiswa. Yakakwira kutanga torque. Service Factor: kusvika 1.15, asi Vatatu-chikamu alternating ikozvino 5 hp yemagetsi mota kazhinji inopa yakanyanya kushanda.
Mapiyona ari muindastiri, tinopa 5 hp magetsi emagetsi 1725 rpm imwe chete chikamu, 240v 5hp mota yemagetsi, Matatu Mota yeMagetsi, Flour Mill Electric mota neMota Phase Electric Motors kune nyika uye tinopa zvakanakisa mushure mekutengesa basa.
5 hp yemagetsi mota 3 chikamu chinogumisirwa nekutonhora fan system uye inopa kuita kwakanaka kwazvo kumagetsi. 5 hp yemagetsi chikepe mota inogadzirwa nekuqina uye kuvimbika, kunyangwe inogona kusvika kuma5 hp emagetsi mota 3600 rpm.
5 hp magetsi mota torque, 1.5 Kg-M, 1400 RPM, 132 Chimiro, 3 Phase, SPFV ine Blower, 5 hp yemagetsi mota 56 fenicha, Horsepower saizi inowanikwa kubva kune stock range.Anyway, Sogears mutengesi anoteedzera weSpecial Chinangwa uye General Chinangwa 5 hp magetsi emagetsi uye ayo anodzora, ndapota inzwa wakasununguka taura nesu chero nguva.